QARAMADA MIDOOBAY OO KA LAABATAY CASUUMADII DOWLADA IRAN EE KA QEYB GALKA SHIRKA LOOGA HADLAYO ARIMAHA SYRIA. – idalenews.com
QARAMADA MIDOOBAY OO KA LAABATAY CASUUMADII DOWLADA IRAN EE KA QEYB GALKA SHIRKA LOOGA HADLAYO ARIMAHA SYRIA.
Qaramada midoobay ayaa ka laabatay casuumad ay horay ugu fidisay dowlada Iran oo ku aadaneyn in todobaadkaan shirka nabadeed ee ka dhacaya magaalad Geneva ay kasoo qeyb galaan, kaasi oo looga hadlayo xaaladaha ka taagan dalka Syria.
Afhayeenka Qaramada Midoobay Martin Nesirky ayaa cambaareeyay in dowlada Iran ay qaadacdo ka qeyb qaadashada qorshaha dowlada KMG ee dalka Syria, kaasi oo la doonayo in lagu hergeliyo shirkaasi.
Casuumaada dowlada Iran ee shirka Geneva ayaa waxaa ka carooday kooxaha xulufada la aheyn dowlada Syria, sida dowlada Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka ee taageera kooxaha mucaaradka.
Maalinamada berito ah ayaa la filayaa in wadahalada nabadeed ay ka bilowdeen magaalada Geneva, waana dadaalkii ugu weynaa oo diblumaasiyiin ay ku doonayaan inay ku dhameeyaan dagaalada dalka Syria.
Dowlada Syria iyo kooxda ugu weyn mucaaradka dalkaasi oo dibad jog ah ayaa la qorsheynayaa inay halkaasi wafuud u kala dirsadaan si ay shirka kaga qeyb galaan, kaasi oo ka dhacaya magaalada Montreux ee dalka Swiss.
Golaha isbahaysiga qaranka ayaa ku hanjabay maalinamadii shalay inay shirka ka baxayaan haddii dowlada Iran ay ka qeyb galayso, iyagoo ku eedeynaya inay taageertay dowlada Bishaar Al Assad.
Madaxa Shaqaalaha ee isbahaysiga mucaaradka Syria Monzer Akbik, ayaa sheegay inay xaq u leeyihiin inay shirka isaga baxaan haddii wafdiga dowlada Iran ay ka qeyb galayaan.
Afhayeenka qaramada midoobay ayaa sheegay in Ban ki-moon uu casuumay Iran markii uu la hadlay kadib masuuliyiin Irani ah,kuwaasi oo uu sheegay inay ka doonayeen taageerada ujeedada laga leeyahay shirkaasi.
Laakiin dowlada Iran ayaa soo saartay Isniintii shalay warsaxaafadeedyo ay ku sheegayso inaysan ka qeyb galaynin shirkaasi ka dhacaya dalka Swiss.
Dagaal xoogan oo lagu qaaday Garoonka Kismaayo, xilli Masuuliyiin Cadaan ah ay caawa ku hooyanayaan.